Ụbọchị My Pet » Nwere ike Pet allergies na dịwara bikọta?
site Catherine Monreal
Ya mere, ị chọtara onye na ị chọrọ ịmatakwu. Mgbe ị na-agwa ha okwu, ma na-onye ma ọ bụ online, e bụ ịmụmụ ọnụ ọchị na ihu gị. You feel that things couldn’t get any better than they are, na mgbe ahụ, ị ​​na-amụta na ha nwere a Pita na ị na-asọ. Gịnị bụ onye na-eme? Ị ga-mkpa nye n'elu mmekọrịta ruru gị ahu anataghi? Nwere uzo ozo ka bụghị ịhụ onye ọzọ? N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ, enwere.
Mbụ, ka onye mara na i nwere ahu anataghi. Nke a dị oké mkpa iji na-emeghe ma na-eme ihe n'eziokwu mmekọrịta (na-amalite na), na-ha ga-enwe ike iji me ka mmeghachi omume na i nwere. Olee otú ha pụrụ ime nke a? Ha pụrụ ime ka ji n'aka na ha na-yi ọhụrụ uwe n'ihu gị ụbọchị (ndị na-enweghị mmekọrịta na Pita mgbe ha ọkọdọ yi). Ọzọkwa, ha nwere ike a lint ahịhịa ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ iji mgbe ha na-abata gị ụbọchị (if their pet rides in the car and there is a transfer from the car to their clothes).
Ihe ọzọ nke ebe-elekwasị anya bụ ịmata ịdị njọ nke gị ahu anataghi. Nwere ike ị na-na-OTC ahu anataghi na nkà mmụta ọgwụ na-enwe ike iji aka mgbede? Ma ọ bụ ị ga-enwe a oké mmeghachi omume nke ga-achọ ihe EpiPen? N'ihi na ndị na-achọ ihe EpiPen, ị ga-mkpa na-amata na mmekọrịta na a ukwuu larịị, because literally, your health is at risk. N'ihi na ndị ọzọ, i nwere ike dị jide n'aka na ị na-gị ahu anataghi na nkà mmụta ọgwụ tupu na-na ha, na mgbe ahụ nyochaa gị mmeghachi omume dị ka abalị na-aga.
Ọ bụrụ na ị na-ewepụta oge ha ebe, ha nwere ike melite a ụlọ ebe Pita na-adịghị ekwe. Dị ka ihe kwukwara oyi akwa nke nchebe, ha nwere ike inwe a nzacha igwe na-agba ọsọ na-allergens nke ikuku. E nwere ọtụtụ ngwaahịa na na-na ahịa maka anataghi arịa ya. Ngwaahịa ndị a ga-ebelata ego nke dander na ikuku, ma ọ bụ na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi na-allergens si abanye ẹkedọhọde ohere.
N'ihi na ọtụtụ ahu anataghi arịa, ha ga-ama nwere ndị a yana mgbakwunye na ha, ma ọ gaghị afụ ụfụ imeghachi ha. Jide n'aka na ị mgbe niile nwere anụ ahụ na aka. Ọ bụrụ na ị nwere allergies na-eme ka itchy, mmiri anya na ndị ọzọ, ị pụrụ iche na-erughị mara mma ka gị na ụbọchị ma ọ bụrụ na gị imi bụ mgbe niile na-agba ọsọ ma ọ bụ ya anya dị ka ị nọworo na-eti. Ị nwere ike ụfọdụ ahu anataghi anya tụlee na ị dị ka nke ọma. This will not only help flush the allergens from your eyes but will also help with the redness and irritation that will be present.
Gị allergies eme ka ị na ụkwara? Ụkwara tụlee na akpịrị lozenges dị oké mkpa inwe a belata nchegbu ụbọchị. How many times have you gotten a tickle in your throat and the more you cough the drier your throat gets? Ụfọdụ lozenges ma ọ bụ ọbụna ike candies nwere ike tinye dị nnọọ ezu mmiri na-otighiti pụọ na kootu gị akpịrị ka ị pụrụ itinye uche na gị ụbọchị.
Na-emeghe, n'eziokwu nkwurịta okwu na a obere nkwadebe, ị ka nwere ike nwere ihe na-atọ ụtọ mmekọrịta ezie na ị nwere ahu anataghi ha Pita.